matanho manomwe munzira kutenda | Apg29
Nhano yako yokutanga munzira kutenda.
Nyaya iyi yakanyorwa vaya vakagamuchira Jesu uye vakaponeswa.
Chokutanga, ndinoda kuzokorokotedza iwe kuti mazvigamuchira Jesu uye ndikabhabhatidzwa akaponesa! Ichi ndicho chinhu chakanakisisa chingaitwa munhu. Zvino anotanga mutsva upenyu nakisisa kwamuri pamwe naJesu Kristu.
Kunyange chakarebesa rwendo runotanga danho, mumwe munhu akati. Izvi zvinokosha kunyanya kana totaura kutenda ufambe. Nokuti ikozvino iwe vanoponeswa uye kuenda kudenga, izvi hazvirevi kuti uri zvino yakatanga zvizere ekuvimba. Asi zvino kunotangira zvose. Zvino unogona kuva uye kudzidza kuziva Jesu kunyange zvakawanda.
Funga achangoberekwa: Ko iye zvakanaka kwakakwana? Haangagoni kutanga kumhanya, kusvetuka, kutamba uye kumhanya nhangemutange motokari pakarepo? Kwete, asi kana ari kubvumirwa kukura, kutanga kuita saka pamwe iye anogona kumhanya nhangemutange motokari kana kuti nguva yokuti iye.
Kabhuku ichi chinofanira kuva pamusoro wako wokutanga matanho munzira kutenda. Hatisi kwakakwana nekuti uri ikozvino akaberekerwa Kristu. Zvinogona kuitika kwauri, sezvinoita mwana anowira pasi uye akakurova. You zvinokundika. Asi musarega. Simuka uende mberi naJesu munzira kutenda!
danho rokutanga iwe akatowana. Ndipo apo iwe vakakumbira Jesu kuti apinde mumwoyo yenyu.
Muna VaRoma chitsauko 10 uye ndima 9 inoti ichi:
"Kuti kana ukapupura nomuromo wako kuti Jesu ndiye Ishe uye ukatenda mumwoyo mako kuti Mwari akamumutsa kubva kuvakafa, uchaponeswa."
Shoko kuponeswa rinongoreva kuti "kuponeswa"! Hazvirevi kuti havana chido, anofarira uye nechido chinhu. Kana ndakagamuchira Jesu, ndakanga anongoti kuponeswa - kuponeswa!
Saved - kubva chii? Iwe vakapukunyuka, pakati pezvimwe zvinhu, kubva kuchivi uye kubva pokurashika kuti gehena nokusingaperi!
Kuti vaponeswe, anofanira kureurura zvinonzwika muromo wake kuti Jesu ndiye Ishe uye ukatenda kuti Mwari akamutsa Jesu kubva kuvakafa. Kana kuzadzisa zviviri zvinodiwa izvi, imi muchaziva pamwe 100% kwazvo kuti imwi ikozvino kuponeswa. Ungaziva sei kuti? Eya, nokuti Bhaibheri rinoti kudaro! Zvakakosha kuti kuvimba neBhaibheri kana totaura zvinhu zvakadai. Hamungaiti kuenda chii manzwiro achiti. Manzwiro anogona rimwe zuva vanoti, "Oh, sei zvinoshamisa kuti ndakaponeswa," uye pazuva rechipiri, pamwe iwe haufaniri chaizvo kuti wakaponeswa. izvozvo
haisi pamusoro "anzwe" asi chii chaizvoizvo Bhaibheri rinoti! Uchadaro here omerera utongi nyore ichi ipapo ndichaenda zvakanaka iwe munzira kutenda.
On kutenda musango, ungasangana nezvipingamupinyi siyana. Zvino zvinokosha kunamatira Jesu. Kana ukaita izvozvo, ruchapinda nzira uye nokutenda hunosimba.
Pane mhando mbiri vanhu apo miedzo nematambudziko. Mumwe wavo kutiza Jesu. Wechipiri vanotizira Jesu. Akanga kwete inotiza Jesu wotishandukira kutenda. Apo pane kutiza Jesu uye kuva vakasimba pakutenda.
Somunhu mutendi mutsva uye une chokwadi zvinhu zvishoma pamwe mikwende yake kuti hazvina kunaka. Panyaya iyi, zvichava zvakanaka. Unofanira kutevera Jesu uye kufamba naye. Zvinhu hazvisi zvakanaka mikwende wako achakubatsira kubvisa kana kuti nguva. Zvose hazvina kubviswa pakarepo kana wabvuma Jesu uye akaponeswa, asi ichanyangarika pamwe nguva. Zviri ichi kuti mumwe shoko rinonzi kuutsvene.
Neniwo ndinoda kutaura izvi akapoteredza kuti zvakajairika chaizvo vatendi vatsva tichikufunga achawana chikuru zvikuru chiri mubvunzo kurwisa. Hongu, hazvina chete nevakawanda, asi nguva dzose saka! Zvingava mangwanani, iuye paya, asi chido!
In mubvunzo uyu kurwiswa zvichava kuguma kana tichizoramba kutevera Jesu kana kudzoka kwaari upenyu akwegura. Kana ukasarudza Jesu kutenda hwakasimba uye vakasimba!
Mwana achafa kana asingaitungamirire kuwana chikafu. Saizvozvowo nemwi. Unoda zvokudya zvomudzimu. Regai kundoitora, unenge akaondoroka mumudzimu uye pakupedzisira kufa mumudzimu mukutenda kwenyu.
Unopinda sei zvokudya? Unogona kuwana zvokudya dzakasiyana. Pakati pezvimwe zvinhu, unogona kudya pachako. Imi itai izvi nokuverenga Bhaibheri. Kana uri mutsva kuverenga Bhaibheri, I akakurudzira kutanga muTestamende Itsva (inova chimwe chikamu cheBhaibheri), uye kuverenga Evhangeri yaMako. Izvi kutanga. Kwoitawo, ramba kuverenga Bhaibheri rose.
Kune vaya vanoedza kuverenga Bhaibheri rose. Sezvo mutendi mutsva, izvi zvakaoma kuita. Tapota verenga anopfuurira chitsauko Testamende Yekare (rinova chikamu chokutanga cheBhaibheri), uye muTestamende Itsva ose zuva. Ipapo uchaona kuti kutenda kwako kucharamba kuchikura.
Munokwanisa kuwana zvokudya pokushumirwa! Chii Unopinda nokuenda kukereke wechiKristu kuti rinoparidza zvose Shoko raMwari uye zvebhaibheri Jesu! I vanokurudzira kuti kuonana chechi munzvimbo yaunogara. Regai kuenda kuchechi saka ndinogona kuva kukubatsira pamwe kuti kuonana. Kana, kana iwe kuna muKristu kuponeswa ani ukavimba. Saka, anogona zvirokwazvo kukubatsira.
Ungaziva sei kana Assembly anekodzero kudzidza? - kureurura Ishe Jesu, haufaniri kuva kunetseka.
Uye ndinoreva kuti uri akasununguka nomuromo wako Jesu. Jesu kwakuponesa uye iye
Unoda Kuva noKuyanana nemi. Anoda kutaura kwauri uye iwe kuwana kutaura naye. Izvi zvakakosha.
Kana uchida mumwe munhu, iwe ita chokwadi kuti kuedza kutaura kuti munhu. Saizvozvowo zviri naJesu. Haufaniri kuva kunotadzisawo kana kusawirirana chero chitendero tsandanyama. Kwete, zvakanga rwechiIsraeri. Taura naye zuva nezuva. Vanoti uine izvozvo uye kupedza nguva naye. Kuti paanoda.
Ini handigoni kutora kwazvo pamusoro zvose munamato zvakavanzika pano, asi ndinoda kukukurudzira pamwe chete chinhu: Mwari anoda kuti anyengetere. Anodana ichi kanoverengeka muBhaibheri.
Muchitsauko 21 uye ndima 22, Jesu anoti ichi muEvhangeri Matthew:
"Zvose zvamunokumbira mumunyengetero munofanira, sezvo imi munofunga."
Jesu anoti, zvino pano unogona kuwana mhinduro kumunamato pamusoro chamunokumbira!
Unogona kunyengetera kuna Jesu, asi Jesu anokurudzira kunyengetera zvakananga kuna Baba muzita raJesu. Sezvakapikirwa mhinduro yomunyengetero! vimbiso yakadaro, Jesu anoti John chitsauko 16 uye ndima 23:
"Pazuva iroro uchandiramba hamukumbiri chinhu. Ameni, ameni, ndinoti kwamuri: Chipi nechipi chamuchakumbira kuna Baba muzita rangu, vachakupai ".
Musakanganwa kutenda Mwari kuti kwakuporesa. Vongai nokuti zvaitwa naJesu kwauri. Kuti akafa uye akamutswa. Kuti iye mupenyu nhasi uye kuti iye zvivi zvako ZVOSE. ipapo
izvi chaicho iwe uye kutenda kwako hunosimba.
Kana uchifanira kukumbira? The mhinduro imi makakohwa Bhaibheri muna First Thessalonians chitsauko 5 uye ndima 17:
In Mabasa chitsauko 2 uye ndima 38 Petro anopindura vanhu vaizoita sei:
"Peter akapindura, 'Tendeukai mubhabhatidzwe muzita raJesu Kristu kuitira kuti zvivi wako uukangamwirwe. Uye muchagamuchira Mweya Mutsvene sechipo. ' "
Munhu wose kuti ipapo kupfidza, uye vose vakabhabhatidzwa. Shoko raMwari rinoti unofanira kurega pachako vabhabhatidzwe. Paunoita izvi, une uyewo chivimbiso: kukupa Mutsvene ave chipo! Munguva inotaurwa muBhaibheri raisanganisira ruponeso izvi zvitatu izvi: kutendeuka, rubhabhatidzo uye Mweya Mutsvene sechipo.
Unofanira kurega pachako vabhabhatidzwe muzita raJesu Kristu. Uchibhabhatidza kwauri kwete muzita chechi ipi, asi zviri muzita raJesu. Uye iwe akabhabhatidzwa kana kuti chinhu pachedu, asi zviri achiri Jesu.
Wabhabhatidzwa nokunyudzwa zvakakwana mumvura uye zvakare sezvo Bhaibheri rinoti muna VaRoma chitsauko 6 uye ndima 3-4:
"Hamuzivi here kuti isu tose vaya vakabhabhatidzwa muna Kristu Jesu takabhabhatidzwa murufu rwake? Saka isu tiri nokubhabhatidzwa murufu: makavigwa pamwe naye, isuwo tirarame upenyu hutsva, sezvo Kristu akamutswa kubva kuvakafa nekubwinya kwaBaba ".
Kubhabhatidzwa kureurura kwezvakatipoteredza kuti ikozvino muve vaJesu. Wabhabhatidzwa Jesu Kristu, kuti ndezvaJehovha nguva dzose naye! Kubhabhatidzwa chiratidzo kuti iwe ikozvino vakapfidza kuna Mwari.
Muna Mako chitsauko 16 uye ndima 16, Jesu anoti:
"Ani naani anotenda uye akabhabhatidzwa achaponeswa, asi ani naani asingatendi achapiwa mhosva."
The wechishanu Danho
Gamuchirai Mweya Mutsvene chipo! danho iri I kare yaibata. Unoda simba kurarama somuKristu uye kuita kuti Jesu akarayira here. Unofanira rubatsiro rwenyu zuva kufamba naJesu.
John chitsauko 14 uye ndima 16-17, Jesu anoti ichi:
"Uye ini ndichakumbira Baba, uye vachakupai mumwe Munyaradzi, kuti agare nemi, Mweya wechokwadi, iyo nyika yausingagoni kugamuchira. Nokuti nyika anoona iye kana anoziva kwaari. Imi munomuziva, nokuti unoramba nemi uye achava mukati menyu. "
Pano panoti kuti nyika haigoni kugamuchira munyaradzi, asi anobvumira kuti kutenda muna Jesu. Mweya Mutsvene chipo kuti kubvuma nokutenda. Saizvozvo iwe wakagamuchira Jesu!
Kamwe magamuchira Mweya Mutsvene saka unogona kutanga kutaura nendimi sezvo rinoti muna Mabasa chitsauko 2 uye ndima 4:
"Uye vose vakazadzwa noMweya Mutsvene uye vakatanga kutaura nedzimwe ndimi, Mweya sezvaakavapa kududza."
Vose vakazadzwa noMweya Mutsvene uye vakatanga kutaura mitauro yose. Nendimi inoti kumwe muBhaibheri. Somuenzaniso, muna Mabasa chitsauko rechigumi mundima 45 uye 46:
"All vaJudha vakatendeka vauya naPetro vakakatyamara
kuti chipo Mutsvene wakadururwa vahedheni. Nokuti vakavanzwa vachitaura nendimi vachirumbidza Mwari. "
Muna Mabasa chitsauko 1 uye ndima 8, Jesu anoti:
"Asi kana Mweya Mutsvene auya pamusoro penyu; uye muchava zvapupu zvangu muJerusarema, nomuJudhea mose, nomuSamaria, uye kusvikira pasi."
Taurira vamwe nezvekutenda muna Jesu Kristu. Usarega izvozvo pachako. Makaponeswa, nokuregererwa uye ave noupenyu husingaperi. Regai vamwe kuona chetezvo.
In Mabasa chitsauko 4 uye ndima 20 inoti Kureurura ichi chinoshamisa:
"Isu, nokuti yedu chikamu havagoni kutaura zvatakaona nezvatakanzwa."
Kuudza vamwe vanhu nezvaJesu ndiye akanakisisa uye nzira inonyatsobudirira yokuita kuti nokuzvidzora kukura uye mukava nesimba mukutenda kwavo.
Ipapo Sauro, pashure ainzi Paul, akaponeswa, akabva akatanga kupupura uye kuvaudza nezvaJesu. Somugumisiro ichi, akawana mamwe simba. Unogona kuverenga muna Mabasa chitsauko 9 uye ndima 22:
"Asi Sauro akava zvakawanda simba, uye vaJudha vaigara muDhamasiko, sezvo akaratidza kuti Jesu ndiye Mesiya."
Usanyadziswa Jesu. Kana iwe umire pamusoro pezvaunotenda, vanhu Vacharemekedza iwe. Iwe hwakazadziswa naJesu.
"Nokuti zvakaita mwoyo uzere, muromo unotaura."
Izvi Jesu anoti Luke chitsauko rechitanhatu mundima 45. Kana chinhu kuti tiri-iyi zvakadaro nhabvu, saka hatina dambudziko nezvazvo neshamwari dzedu. Hatidi chero nzira kuita nesimba. It chete inoyerera. Zvino, chokwadi, Jesu akachinja upenyu hwedu. Hatifaniri kuudza nezvake kune vamwe vanhu?
Zvose zvinoitika: Batisisa Jesu! Usarega chero kuwana kuti amusiye. Ndiye chinhu chakanakisisa chaitika kwauri!
iwe ucharamba naJesu kusvikira kumagumo, uchawana Li Vets korona kuDenga! Izvi Jesu anoti Zvakazarurwa 3 uye ndima 11:
"Nokukurumidza Ndichadaro. Bata zvaunazvo, kuti hakuna achakutorerai korona yako. "
matanho ose aya nomwe ndivo chete mavambo. Izvi apo zvinoitika:
- kufamba Jesu atanga!